Mandrakitra Ny Tolon’ny Vahoaka Indizeny Lumad ao Filipina Ity Tranom-bakoka Ao amin’ny Tobim-pihetsiketsehana ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2016 14:38 GMT
Tonga soa ato amin'ny Museo Lumad: Tany, Kolontsaina, Fiainana.
Nanangana tranom-bakoka ao anatin'ny tobim-pihetsiketsehana ao amin'ny renivohitra Manila ny mponina indizeny Lumad ao atsimon'ny nosy Filipina Mindanao, mba hanasongadinana ny kolontsaina sy ny tolon'izy ireo tsy mitsahatra manohitra ny famindran-toerana ateraky ny fandrobàna, fakàna tany an-keriny sy ny fandefasana miaramila hifehy ny tanindrazan'izy ireo .
Antsoina hoe “Museo Lumad”, anisan'ny “Lakbayan ng Pambansang Minorya” (Karavaninan'ny Vitsy an'isa ao amin'ny firenena) ny Tranombakoka, izay ahitana Lumad, Moro sy vitsy an'isa hafa manerana ny firenena miisa 3000 mankany an-drenivohitra mba hisarihana ny saina manoloana ny olan'izy ireo.
Niafara tamin'ny herisetra ny fihetsiketsehana lehibe teo anoloan'ny Masoivohon'i Etazonia nataon'ireo vondrona vitsy an'isa ao amin'ny firenena tamin'ny 19 Oktobra 2016. Naparitaky ny polisy tamin-kerisetra tamin'ny fampiasàna baomba mandatsa-dranomaso, kibay ny famoriam-bahoaka, ary nandona sy nanitsaka ireo mpanao fihetsiketsehana ny fiaran'ny polisy.
Mpianatry ny oniversite sy mpitsidika hafa avy ao Manila mitsidika ny ao anatin'ny Tranom-bakoka Lumad.
Natomboka sy novolavolain'ny “Kalumaran”, fikambanana Lumad vitsy an'isa nijoro tamin'ny taona 2006, ary mbola mitantana ny toerana miaraka amin'ny fanampian'ireo mpiaro zo sy vondrom-panohanana ny Museo Lumad .
Natambatra tao amin'ny toby ho an'ny vitsy an'isa ao amin'ny firenena ny tranombakoka, ary nampiantranoin'ny Anjerimanontolon'i Filipina Diliman ao an-tanànan'i Quezon nandritra ny tapa-bolan'ny 14 – 28 Oktobra 2016.
Fampahatsiahivana ho an'ny mpitsidika alohan'ny hidirana ao amin'ny tranom-bakoka.
Alohan'ny idirana ao amin'ny tranom-bakoka, ampahatsiahivina amin'ireo mpitsidika, ankoatra ny zavatra hafa, ny mba ho feno fanajana, mijery ny fampirantiana ao anatin'ny fahanginana ary tsy mikasika ny zavatra aranty. Ampirisihina ihany koa ireo mpanjifa mba handray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra aorian'ny fitsidihana, ho fandalinana ny fahafantaran'izy ireo ny kolontsaina sy ny tolon'ny vitsy an'isa ao amin'ny firenena.
Alahatra araka ny lohahevitra samihafa ny fampiratiana ao anatiny ary manaraka ny vazantany efatra lehibe, fantarina amin'ny fiteny fampiasa: “Amihan” (Avaratra), “Habagatan” (Atsimo), “Sidlakan” (Atsinanana) ary “Kasadpan” (Andrefana).
Manomboka ao atsimo, misy ireo sary sy asa tanana isan-karazany mampiseho ny tantara, tany sy kolontsain'ny vahoaka Lumad:
Mponina avy ao atsimo izahay. Tranonay ny ao atsimo, nahitana tany mamokatra sy malalaka fahiny, ala maitso, ahitana ony sy renirano madio mangalahala, ary olona miaina ao anatin'ny filaminana sy ny fanambinana.
Anisan'ny fampiratiana momba ny tantara, tany sy ny kolontsain'ny Lumad ny asa-tanana tahaka ny fitaovana sy harona isan-karazany.
Naranty miaraka amin'ny sarin'ny fomba fiainan'izy ireo ny zavamaneno sy ny rakitry ny ela hafa Lumad .
Amin'ny lafiny andrefana, hita ao ireo ranty mamelabelatra ireo fanitsakitsahana ny valan-drazana, sarintanin'ireo toeram-pitrandrahana sy famenoana toby miaramila ny toerana, ary ny sarin'ireo Lumad lasibatry ny famonoana tsy mandalo fitsarana sy ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona hafa:
Ny masoandro mody ao amin'ny tany navelan'ny razanay. Lasa “tanin'ny sisa tavela” ankehitriny ireo toerana navelan'ny razana. Mamely ny firenena ny ampihimamba sy ny fakàna tany tsy ara-drariny, ataon'ny orinasa iraisampirenena sy ny tetikasam-panjakana indrindra indrindra. Miaraka amin'ny fandefasana miaramila hifehy ny vondrom-piarahamoninay izany.
Mpianatry ny oniversite miresaka ny olana atrehin'ny Lumad vitsy an'isa ao amin'ny firenena tahaka ny fandrobàna ny tany navelan'ny razana sy ny fandefasana miaramila hifehy ny fiarahamonina.
Sary mampiseho ny fahasimbàna nateraky ny fitrandrahana mieli-patrana sy ny voka-dratsiny teo amin'ny fiarahamonina Lumad.
Sarin'ireo Lumad lasibatra tamin'ny vono olona tsy nandalo fitsarana sy ny fanjavonana noterena voalaza fa nataon'ny miaramila sy ny milisy.
Ao Atsinanana kosa mandritra izany, dia manasongadina ny firaisan-tsaina, ny fanoherana, sy ny fanantenan'ny Lumad vitsy an'isa amin'ny tolona hiarovana ny zon'izy ireo:
Mijery any Atsinanana izahay satria misy ny fanantenana. Miaraka amin'ny firaisan-kerinay sy ny asa amin'ny maha Lumad, hiaro ny Toerana navelan'ny Razanay izahay, ary hanatsara ny kolontsainay sy ny maha anay anay.
Sidlakan: ny ampahan'ny atsinanana amin'ny fampiratiana mampiseho ny firaisankina, ny famaharana sy ny fanantenan'ny Lumad.
Lehiben'ny Lumad Bukidnon, Jimmy Liguyon (ankavia) voalaza fa novonoin'ny vondrona milisy rehefa nandà tsy hanasonia ny sertifikàn'ny tany navelan'ny razana izay ahafahan'ireo mpampiasa vola goavana amin'ny fitrandrahana hiditra ao. Manohy ny tolona mba hiaro ny tany sy ny zon'izy ireo i Bai Likayan Bigkay (afovoany), mpiandraikitra ny vehivavy Lumad avy ao Bukidnon, sy Datu Guibang Apoga (ankavanana) ao amin'ny vondrom-piarahamonina Lumad ao An-tendrombohitra Apo.
Farany, antso firaisankina avy amin'ny mpitsidika ny zorony avaratra ao amin'ny tranombakoka:
Miaina olana, fanararaotana sy fampijaliana tahaka izany ihany koa ny olona ao avaratra, anisan'izany ny tsy mponina indizeny ao Mindanao. Mila miray hina ny mpiasa, ny tantsaha, ny mahantra an-tanàn-dehibe ao an-tanàna, ny olon'ny fiangonana, ny mpianatra sy ny tanora, ny matihanina, sy ny mpandraharaha madinika mba hiaro ny Tany navelan'ny Razana, ny otrikarena sisa tavela amin'ny harem-pirenena, izay misy ny fototry ny kolontsaina Filipiana.
Zavamaneno kulintang ary ao ambadikany ny fampiratiana momba ny firaisankina miaraka amin'ny Lumad.
Antso ho firaisankina ao amin'ny Lumad sy ny vitsy an'isa hafa ao amin'ny firenena.
Araka ny Fanambaran'ny Fitsipiky ny Museo Lumad, atolotra “ho an'ny taranaky ny vitsy an'isa manaraka ao amin'ny firenena, ny vondrona mpanohana ary ho an'ny vahoaka Filipiana” ny tranombakoka. Milaza koa ny fanambarana fa tantaraina amin'ny fomba fijerin'ny Lumad ny tantaran'ny tranombakoka:
Tsy toy ny tranombakoka ankehitriny, na akademika izay mirona amin'ny fandraisana ny endrika sy ny zavatra indizeny ho toy ny zavatra tsara tarehy aranty fotsiny, ary tsy mifandray amin'ny fanamafisana ny hetsika ara-tsosialy ho an'ny zon'ny vahoaka indizeny ity tranom-bakoka ity.
Tsy mitovy amin'ny fomba fijery ara-panjanahantany sy ny ara-panjanahantany amin'ny endriny vaovao momba ny olona indizeny izay mampaharitra ny fanavakavahana napetraka sy manambany ny vitsy an'isa ao amin'ny firenena ho toy ny olona ao anatin ‘ny sivilizasiona izay’ ambany ‘,’ tratra aoriana ‘, na efa ntaolo ity tranombakoka ity.
Avy amin'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity ny sary rehetra, nahazoana alalana.